त्यहाँ के अण्डवियर कपडा छन्? - समाचार - Beimon बुनाई कपड़ा कं, लिमिटेड
त्यहाँ के अण्डवियर कपडा छन्?
१: कपासअंडरवियर कपडा
कपासको नरम र आरामदायी बनावट, अद्वितीय सासहाबिलिटी र पसीना शोषण छ, र अण्डवियर बनाउनको लागि उत्तम सामग्री हो। उही समयमा, यो प्राय: अंडरवियरको लागि मुख्य सामग्री पनि हो। एकै समयमा, कपास बनावटले रंगे रंगको प्राकृतिक स्वाद हुन्छ, जुन अन्य कपडाहरूको साथ बदल्न गाह्रो हुन्छ।
२: वास्तविक रेशमअंडरवियर कपडा
वास्तविक रेशम यसको सौन्दर्य, हल्कापन, कोमलता र चिकनाईका लागि प्रसिद्ध छ। यो एक लामो समय को लागी यसको अद्वितीय आकर्षण को लागी मानिस द्वारा माया गरीएको छ। एकै समयमा, यो पनि एक कडा स्वास्थ्य समारोह, छ, नमी पारगम्यता। योसँग अद्वितीय सासहाबता र हाइग्रोस्कोपिकिटी छ, र यसले मानव शरीरको तापक्रम र आर्द्रता पनि समायोजन गर्न सक्छ। यो मानवजातिको "दोस्रो छाला" भनेर चिनिने कपडाको योग्य छ।
3: Natural fiber अंडरवियर कपडा
यो आधुनिक टेक्नोलोजीले परिष्कृत फाइबर हो जुन अचानक पदार्थहरू प्रयोग गर्दछ, जस्तै सोयाबीन फाइबर, दूध फाइबर, केरा फाइबर, अनानास फाइबर, मोडल फाइबर, इत्यादि। एकै समयमा, यो पनि धेरै राम्रो सासबेबिलिटी र मोइस्चराइजिंग प्रकार छ, भित्री कपडाको रूपमा। यो पनि राम्रो विकल्प हो।
:: रासायनिक फाइबरअंडरवियर कपडा
रासायनिक फाइबर उत्पादनहरू सधैं मानिसहरूले मनपराउँदछन्। यद्यपि यो उच्च आणविक यौगिक वा नाइट्रोजन युक्त यौगिकहरू जस्तै कोइला, पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यासबाट निकालेको छ, यसले मानव शरीरमा निश्चित उत्तेजक प्रभाव पार्छ। केही मानिसहरूलाई रासायनिक फाइबरहरूसँग एलर्जी हुन्छ, डर्मेटाइटिसको कारण, खुजली, पीडा, रातो र सूजनको कारण। केवल त्यो मात्र होइन, यसको सास फेर्ने र नमी शोषण पनि निकै गरिब छ।
:: लिनेन फाइबरअंडरवियर कपडा
हेम्प अवान्त-गार्डे एक प्रकारको हेम्प फाइबर हो जुन हेम्प स्टेमबाट निकाल्छ, यसको बनावट अपेक्षाकृत मोटा छ, र यो झिम्काउन सजिलो छ। तर हेम्प फाइबर धेरै सास लिन, धेरै हावामा राखिएको र शीतल छ, र ग्रीष्म heतुमा हेम्प फाइबर अंडरवियर लगाउनु राम्रो विकल्प हो। एकै साथ, हेम्प फाइबर डाई गरे पछि, रंग धेरै उज्यालो हुन्छ, र यसको कडा घर्षण प्रतिरोध र राम्रो लोच हुन्छ। सबै प्राकृतिक फाइबरहरू मध्ये, सबैभन्दा लोकप्रिय एक बाँस फाइबर हो, जसलाई यसको सास फेर्ने र मोइश्चराइजिंग प्रकारका लागि "सास फेरेबल" भनिन्छ।
6ï¼š इलास्टिक नेट
स्ट्र्याच नेट बीम अंडरवियरको लागि एक सामान्य रूपमा प्रयोग गरिएको सामग्री हो। यो सामग्रीको कडा लोच र ठूलो जाल छ, र सामान्यतया आर्थोपेडिक्सको शक्ति बढाउन दुई वा तीन तहमा प्रयोग हुन्छ। कोर्सेट र ट्राउजर सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ।
लेस अण्डवियरको मुख्य सजावटी वस्तु हो, प्राय: लोचदार, फराकिलो र साँघुरो हुन्छ। विस्तृत फीता १० सेमीको बारेमा छ, जुन अण्डरवियरको विभिन्न भागहरूमा काटेर सजावट गर्न सकिन्छ; साँघुरो फीता केवल १ सेमी मात्र हो, सामान्यतया अंडरवियरको भित्री किनारामा सिलाइन्छ।
अघिल्लो:Beimon बुनाई कपडा उत्पादनहरू
अर्को:के अण्डरवियर कपडा नायलॉन राम्रो छ वा पॉलिएस्टर फाइबर राम्रो छ?